﻿Download I-Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) from Official Microsoft Download Center
Central Kurdish - Iraqe-DariIsi-AlbaniaIsi-Amharic saseIsi-ArmenianIsi-AssameseIsi-Azeri (EsiyisiLatini)IsiBasqueIsi-BelarusIsiBengali (isiNdiya)IsiBengali (saseBangladesh)IsiBhunu IsiBosnia (EsiyisiLatini)IsiCatalaIsiFilipinoisiGaliciaIsiGeorgiaIsiGujaratiIsiHausaIsiHindiIsi-IcelandIsi-IgboIsi-IndonesiaIsiKannadaIsiKazakhIsiKhmerIsiKinyarwandaIsiKonkaniIsiKyrgyzIsiLuxembourgIsiMacedonia (saseMakhedoniya endala)IsiMalay (saseMalesia)IsiMalayalamisiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiNepalIsiNorway (esiyisiNynrsk)Isi-OriyaIsiPediIsiPersiaIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiSerbia (esiyisiCyril)IsiSinhalaIsiSwahiliIsiTamilIsiTatarIsiTeluguIsiTswana (saseNingizimu Afrika)Isi-Uzbek (EsiyisiLatini)IsiVietnamIsiWelshIsiWolofIsiXhosaIsiYorubhaIsiZuluNgokwe-IrishPunjabi - Islamic Republic of PakistanScottish Gaelic - United KingdomSerbian (Cyrillic) - Bosnia and HerzegovinaSindhi - Islamic Republic of PakistanTajik - TajikistanTigrinya - EthiopiaTurkmen (Latin) - TurkmenistanUrdu - PakistanUyghur - China
I-Windows Language Interface Pack (LIP) ikunikeza inguqulo ehunyushwe ingxenye yezindawo ezisebenziswa jikelele ze-Windows. Emva kokufaka i-LIP, izihloko zombhalo kuwizadi, amabhokisi omyalezo, amamenyu, nosizo nokusekela kuzoboniswa kulimi lwe-LIP. Umbhalo ongahumushiwe uzoba uncwelana lolimi ye-Windows 8.1. Ngokwesibonelo, uma uthenge inguqulo yesiPenishi ye-Windows 8.1, futhi wafaka i-Catalan LIP, eminye imibhalo izovela ngesiPenishi. Ungafaka i-LIP engaphezu kweyodwa kulimi olulodwa lwesisekelo. Ama-LIP e-Windows angafakwa kuzo zonke izinguqulo ze-Windows 8.1.
Ukuze uthole izimfuneko zesistimu, chofoza lapha
Ukuze uthole iziqondiso zangaphambi kokufaka, chofoza lapha
Chofoza inkinobho landa kuleli khasi ukuqalisa ukulanda, noma khetha ulimi olwehlukile kusuka ohlwini olwehlayo.
Ukuqala ukufaka ngokushesha, chofoza Sebenzisa.
Ukugcina ukulanda kwikhompyutha yakho ukuze ufake ngemva kwesikhathi, chofoza Gcina
Ngemva kweziqondiso zangemuva kokufaka, chofoza lapha
Ukuthola okumayelana nezinkinga ezaziwayo, chofoza lapha